Ku beddelashada Cinwaanada Emailka Sirdoonka Bulshada | Martech Zone
U badalida cinwaanada Emailka Sirdoonka Bulshada
Talaado, Janaayo 10, 2012 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Tirada iibiyeyaasha halkaas jooga ee awooda inay ku milmaan emaylkaaga iyo liisaska macaamiisha ee leh macluumaadka bulshada ayaa yaraanaya. In badan oo ka mid ah aaladaha warbaahinta bulshada ayaa ku daraya dejinta asturnaanta si loo yareeyo faafitaanka macluumaadkan. Flowtown iyo Rapleaf uma muuqato inaad bixineyso macluumaadka astaamaha bulshada mar dambe.
Kaliya istaagga warshadaha ayaa umuuqda inuu yahay Fliptop (kuwaas oo waliba iibsaday Qwerly). Fliptop wuxuu ganacsigiisii ​​u badalay dhamaadkii 2011 inuu kaliya sameeyo kobcinta sirdoonka bulshada. Fliptop wuxuu xogtiisa ka helaa ilo badan oo dadweyne ah, wuxuuna isku daraa si uu u sameeyo astaamaha isticmaalaha. Dhammaan macluumaadka la ururiyey waa kuwo guud waxaana laga heli karaa makiinadaha waaweyn ee wax raadiya iyo websaydhada ganacsiga. Fliptop wuxuu kaloo la midoobayaa Salesforce Data,
Kheyraadka kaliya ee dheeriga ah ee aan helay waa NetProspex. NetProspex wuxuu kuu ogolaanayaa inaad buuxiso, nadiifiso, xoojiso, wadaagto oo aad soo dejiso xogta. Waxaa jira adeegyo yar yar sida fiiri waxaad ku sameyn kartaa raadinta, laakiin midkoodna uma muuqdo inuu diirada saarayo xoojinta emaylka saafiga ah sida Fliptop.
Tags: xoojinta emaylkaliiska emailkakobcinta liiska emailkadusha saresirdoonka bulshada
4 Tilmaamood Oo Si Fiican Uga Wanaagsan
Bc Aan Rasmi Ahayn
Jan 27, 2012 at 11: 38 AM
Haye, waxaa jira xalka CRMe ee CMIP. Waa Khariidad Aqoonsi oo Macaamiisha Bulshada ah. U beddel CRM Email-ka xogta guud.